बिस्थापित हुनै लाग्दा फुटपाथ ब्यवसायि भन्छन,उपमहानगरले ब्यवस्थापन गरे कर तिर्न तयार छौ - Everest Daily News
इटहरी(तेजबहादुर बन )। बिगत १४ वर्ष देखि सामान्य फलफुल बेचेर जिविकोपार्जन गर्दै आएका इटहरी ५ निवासी गोविन्द खनाल स्थानीय सरकारसंग रूस्ट छन । उनले चलाउदै आएको ब्यवसाय अव स्थानतरण गर्नुपर्ने अवस्था छ तर कहा गर्ने ठाउको कुनै ठेगान छैन । त्यसैले उनि चिन्तित पनि छन ।
त्यस्तै इटहरी गैसारका अशोक थपलिया पनि चिन्तामा डुबेका छन । ५ वर्ष देखि ठेलामा सामान्य चिया नास्ता बेच्दै आएका उनको पनि अहिलेको स्थानबाट उठिबास हुने भएपछि कहा जाने केहि अत्तो पत्तो छैन । निर्माणधिन ६ लेन राजमार्गले उनि जस्ता २ दर्जन फुटपाथ ब्यवसायीहरूलाइ उठिबास लगाइदिएको छ ।
राजमार्ग निर्माणले गति लिएपछि सडक क्षेत्रमा ब्यवसाय गर्दै आएका करिब २ दर्जन बढी फुटपाठ ब्यवसायिहरू बिस्थापित हुने तयारीमा छन । उनिहरू उपमहानगरले राम्रो र पायक स्थानमा स्थानतरण गरे आफुहरू राज्यलाइ कर तिर्न तयार रहेको बताउछन । यस अघि सम्म फुटपाथमा ब्यवसाय गर्नेहरूले उपमहानगरलाइ कर नबुझाएपनि सरसफाइ शुल्क भने मासिक २०० (दुइ शय ) बुझाउदै आएका छन ।
राजमार्गमा ब्यवसाय गर्नु आफैमा गैर कानुनि मानिन्छ तर पायक स्थान अभावका कारण बर्षाैदेखि सोहि ठाउमा ब्यवसाय गर्दै आएका सामान्य फलफुल पसल देखि ठेलामा चिया बेचेर जिविकोपार्जन गर्नेहरू अब साच्चै मार्कामा पर्ने भएका छन ।
इटहरीस्थित धरान रोडमा राजमार्जमार्ग निर्माणले गति लिइरहदा फुटपाथमा अवस्थित २ दर्जन बढी साना ब्यवसायिहरू अहिले पुर्ण रूपमा बिस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन ।
संगैमा बिराटनगर रोडस्थित राजमार्गको सिमा क्षेत्रमा बनेका भवनहरूलाइ छुन सक्दैन हामि जस्तालाइ उठिबास लगाएर के गर्नु ? धरान रोडस्थित फलफुल ब्यवसाय गर्दै आएकि संगिता मिश्र बताउछिन । उनि भन्छिन कानुन सानोलाइ मात्र लाग्दोरहिछ ठुलालाइ कहा छुन्छ र ?
धरानलाइनमा बर्षाैदेखि फुटपाथ ब्यवसाय गर्दै आएकाहरूको एउटै भनाइ छ उपमहानगरले पायक पर्ने स्थानमा ब्यवस्थापन राज्यलाइ कर तिर्न तयार रहेको उनिहरूको तर्क छ । राजमार्ग निर्माणले गति पाइरहदा आफुहरू बिकासको बाधक नबनिने तर ब्यवस्थित ठाउ नभएकोले अब कहा जाने वा ब्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने होकि भन्ने पिर परेको फलफुल ब्यवसायी गोविन्द खनाल बताउछन ।
यस अघि पनि राजमार्ग क्षेत्रमा ब्यवसाय नगर्नु भनि उपमहानगरले शुचना जारी गरी ठाउ खालि गर्न अनुरोध गरेपनि पायक स्थानको अभावले आफुहरू सोहि स्थानमा बस्न बाध्य भएको तर अबको केहि दिनमै राजमार्ग क्षेत्र छोडने फुटपाथ ब्यवसायिहरूको भनाइ छ ।